I-Apple ivumela ukuthi ingakhokhi izindleko zangoMeyi ze-Apple Card | Ngivela kwa-mac
I-Apple ikuvumela ukuthi ungakhokhi izindleko zangoMeyi ze-Apple Card
Siyaqhubeka futhi sizoqhubeka nokukhuluma, impela, yebo izinhlelo ezithathwe yinkampani yaseMelika ukuzama ukunciphisa imiphumela yobhadane lomhlaba jikelele. eyenziwe i-coronavirus. Njengoba sesishilo kaningi, inkinga yezempilo ihambisana nenkinga yezomnotho ehlasela wonke amazwe. Ngalesi sizathu, i-Apple izovumela labo abanezinkinga zezezimali ukuthi bangakhokhi izindleko zenyanga kaMeyi ye-Apple Card.
Uma unezinkinga zezezimali ngenxa ye-COVID-19 ungayihlehlisa inkokhelo kaMeyi ye-Apple Card.
Ikhadi lesikweletu le-Apple elisekelwa yi- UGoldman Sachs, Kungumsebenzi ovele waba nentshisekelo kubantu abaningi baseMelika. Masikhumbule ukuthi leli khadi, okwamanje, isebenza kuphela e-US. Inzalo etholakala nyangazonke ayiphakeme kakhulu futhi inikezwe abasebenzisi abaxazululayo, ngemuva kocwaningo olwenziwe yisikhungo sezimali.
Nyanga zonke izindleko ezenziwe kumele zikhokhwe. Inkokhelo yenziwa ngosuku lokuqala lwenyanga. Kodwa-ke, kulezi zinyanga ezimbili ezedlule, izinto sezishintshe kakhulu. Abantu abaningi banayo izinkinga ze-solvency yezezimali ngenxa yegciwane le-coronavirus. Balahlekelwe yimisebenzi okwesikhashana noma unomphela.
Lesi simo siyabhekelelwa yi-Apple, ethathe isinqumo ungakhokhisi izindleko ezitholakele ukusetshenziswa kwekhadi, kwabo bonke labo bantu abasesimeni esiyingozi noma esinzima. Kepha ngalokhu, laba basebenzisi kufanele baxhumane nensizakalo futhi bacele ukuhlehliswa kwezinkokhelo.
I-Apple yenza itholakale kumakhasimende, i- Ikhasi lokusekela le-Apple Card, lapho kufanele bhalisa kuHlelo Usizo Lwamakhasimende, oluzokuvumela ukuthi weqe ukukhokha kwenyanga kaMeyi ngaphandle kokuthola imali yenzalo. Okufanayo kwenziwa yiGoldman Sachs ngenyanga edlule futhi kuzoqhubeka nakule nyanga.
Ukuthinta okuhle nalabo abadinga kakhulu ezikhathini ezinzima.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Apple ikuvumela ukuthi ungakhokhi izindleko zangoMeyi ze-Apple Card
IMacBook Pro elandelayo ingaba ngamasentimitha angu-14 ngomthamo omkhulu
Umsebenzi we-oximeter ku-Apple Watch ungathuthukiswa